Izindaba - Izimbotshana: Ziyini Futhi Sizivimbela Kanjani?
E-AT Still University - eMissouri School of Dentistry and Oral Health
Ubuwazi ukuthi uqweqwe lwawo lwamazinyo luyinto enzima kakhulu emzimbeni womuntu? Uqweqwe ungqimba lwangaphandle oluvikelayo lwamazinyo ethu. Amagciwane asemilonyeni yethu asebenzisa ushukela esiwudlayo ukwenza ama-asidi angaqeda lolu ungqimba oluvikelayo, akhe umgodi. Lapho nje koqweqwe lwawo seluhambile, alubuyeli emuva. Kungakho udokotela wamazinyo wakho kanye nokuhlanzeka kwamazinyo behlala bekutshela ukuthi uxubha ngomuthi wokuxubha we-fluoride futhi uhlanzeke phakathi kwamazinyo akho! Ungafunda kabanzi mayelana nezikhala nokuthi ungazivimbela kanjani ngezansi.
Umgodi imbobo ezinyweni lakho. Umgodi ekuqaleni ungabukeka njengendawo emhlophe, engalapheka. Ngokuhamba kwesikhathi, izobukeka njengendawo ensundu noma emnyama. Izimbotshana zingaba ncane noma zibe nkulu. Izikhala zingakha ezindaweni eziningi, kepha zivame ukwakheka eziqongweni zamazinyo akho lapho uluma khona naphakathi kwamazinyo akho lapho ukudla kubambeka khona. Izimbotshana ezingalungisiwe zingadala ukuzwela, ubuhlungu, ukutheleleka, futhi kungadala ukuthi ulahlekelwe ngamazinyo akho. Indlela engcono kakhulu yokugcina amazinyo akho nokuwagcina enempilo ukuvimbela izimbotshana.
Yini Ebangela Izimbobo?
Ingabe amazinyo akho ake azizwe “efiphele” emva kokudla? Uyabona uma uxubha futhi uphonsa lo muzwa omfushane uyahamba? Uma singagudluli futhi sishaye amabhaktheriya nokudla esikudlayo kuyakha futhi kwakheke into enamathelayo ebizwa nge-plaque (plak).
Usuku lonke, amabhaktheriya adla ukudla esikudlayo. Uma sidla noma siphuza ushukela, amagciwane asemilonyeni yethu awusebenzisa ukuze aphile futhi enze i-asidi. Le asidi ihlala emazinyweni ethu futhi ihlasela ingaphandle lamazinyo ethu. Ngokuhamba kwesikhathi, i-asidi idonsa amazinyo ethu, idale umgodi.
Ukuqonda ukuthi umgodi wakha kanjani, ake sibheke ukuthi yini eyenza izinyo. Uqweqwe lwesembozo esinzima esingaphandle esivikela amazinyo ethu. Ngezansi koqweqwe lwawo kukhona i-dentin. I-Dentin ayinzima njenge koqweqwe lwawo. Lokhu kwenza kube lula ukuthi izimbotshana zisabalale futhi zikhule. Ngezansi kwe-dentin kukhona uginindela. Uginindela kulapho kuhlala khona izinzwa negazi.
Uma umgodi ungalungisiwe, amabhaktheriya angahamba esuka koqweqwe lwawo aye e-dentin futhi angafinyelela kuginindela. Uma amabhaktheriya avela emgodini angena ku-pulp, kuba yisifo.
Ukutheleleka kwamazinyo kungaba kubi futhi kusongele impilo uma kungenakwelashwa. Bheka udokotela wamazinyo ngokushesha uma ubona noma yikuphi kokulandelayo:
• Ukuvuvukala ebusweni bakho noma emlonyeni wakho
• Ukubomvu emlonyeni noma ngaphakathi kwakho
• Ubuhlungu emlonyeni wakho
• Ukunambitheka okungalungile emlonyeni wakho
Ngubani Osemngciphekweni Wezimbotshana?
Izingane, intsha, nabantu abadala bonke bangaba sengozini yokuthola izimbotshana. Ungaba sengozini enkulu uma:
• Ungadla phakathi kokudla
• Yidla ukudla neziphuzo ezinoshukela
• Unomlando womuntu siqu kanye / noma womndeni wezimbotshana
• Unamazinyo aqhekekile noma aqhephukile
• Thatha imishanguzo ebanga umlomo owomile
• Uthole ukwelashwa ngemisebe ekhanda noma entanyeni
Iphathwa Kanjani Imigodi?
Izidumbu kufanele ziphathwe udokotela wamazinyo. Udokotela wamazinyo uqeqeshelwa ukubona izimbotshana. Umgodi ekuqaleni ungalungiswa nge-fluoride. Uma umgodi ujulile, okuwukuphela kokulungiswa kungaba ngodokotela wamazinyo ukususa umgodi bese ugcwalisa indawo ngento enombala osiliva noma omhlophe. Uma izinyo linomgodi omkhulu, lingadinga ukwelashwa okuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe.
Ngingayinciphisa Kanjani Ingozi Yami Yezindwangu?
• Phuza amanzi nge-fluoride
• Xubha ngomuthi wokuxubha we-fluoride izikhathi ezimbili ngosuku
• Hlala kude nokudla neziphuzo ezinoshukela, njengoswidi nesoda. Ungaziphuzi noma uzidle usuku lonke. Uma uzodla noma uphuze izinto ezinoshukela yenza kanjalo ngezikhathi zokudla.
• Nciphisa ukudla okulula okumnandi phakathi kokudla
• Hlanza phakathi kwamazinyo akho nsuku zonke
• Vakashela udokotela wamazinyo wakho njalo
• Izimpawu zokuvala amanzi zingabekwa emazinyweni angemuva ukuze zivikeleke kangcono kumagciwane abanga izimbotshana emiseleni.